IZITAYILE EZI-50 EZIGQWESILEYO KUNYE NEENWELE ZEBALDING MEN (2021 IZITAYILE) - IINWELE ZAMADODA
I-50 yeeNwele eziBalaseleyo zeNdoda yokuBala yamadoda
Eyona Iinwele Zamadoda I-50 yeeNwele eziBalaseleyo zeNdoda yokuBala yamadoda
Ukuba uqala ukuya kwi-bald okanye unwele olucekeceke ngaphezulu, isenokuba lixesha lokujonga inkangeleko entsha. Ngelixa kuphela abona banethamsanqa akufuneki bakhathazeke…
Ukuba uqala ukuya kwi-bald okanye unwele olucekeceke ngaphezulu, isenokuba lixesha lokujonga inkangeleko entsha. Ngelixa kuphela abafana abanethamsanqa kunganyanzelekanga ukuba bakhathazeke ngenkqayi yeepateni zamadoda, zininzi iinwele zokucheba zamadoda anebala anokuzimela okanye agqume amabala anempandla. Nokuba une-hairline ecekethekileyo, u-balding kwisithsaba, okanye ufuna nje indlela engcono yokwenza isitayile sokucheba iinwele, iinwele zamadoda ezifanelekileyo zinokukunceda ukuba ube nenkqayi ngobabalo. Ukusuka kwiinwele ezimfutshane ezinje ngokusikwa kwe-buzz kunye ne-crew cut to fade emacaleni nasemva ngeenwele ezinde ezikamiweyo okanye ezityibilikisiweyo, kubalulekile ukukhetha ezona ndlela zilungileyo zokucheba iinwele zamadoda anezitayile kwaye apholileyo. Nazi iinwele ezithandwa kakhulu zeenwele kubafana abaneenwele ezinciphileyo kwi-20s, 30s, 40s, kunye 50s zabo.
1Izinwele zeenwele zamadoda
1.5Inwele ye-Ivy League
1.6Amacala amafutshane Iinwele ezinde Phezulu
1.7Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
1.9Quiff ngeTaper Fade
1.10Ukucheba iinwele okuPhakamileyo kunye nokuQinisekile
1.11Ulusu luphele kunye neenwele ezimfutshane
1.12Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
1.15Mfutshane kunye noMessy
MbiniUkucheba iinwele kwamadoda aneenwele eziNciphile
3Iimveliso zeenwele eziPhambili zaMadoda zeNwele eziNciphile
Izinwele zeenwele zamadoda
Ukunqunyulwa kwe-buzz yenye yezona zinwele zifutshane zibalaseleyo zamadoda e-balding. Intloko echetyiweyo iyakoyikisa xa ungazi ukuba uza kujongeka njani ngaphandle konwele. Ukusikwa kwe-buzz kukudibanisa okugqibeleleyo okufutshane kunye nokukhula okuncinci. Buza i-barber yakho ye-buzz cut fade ukuze amacala kunye nomva kucofwe.
Ijongeka njengendoda kakhulu, kwaye ilungele amadoda aneenwele eziqala ukubuyela kwisithsaba kunangaphambili. Nangona kunjalo, ukuba iinwele zakho zincinci zijikeleze umda weenwele, i-cut buzzed iyasebenza ekubuyiseleni ingqalelo ebusweni bakho kwaye kude nelahleko yakho yeenwele. Ukunqunyulwa kwe-buzz kulula ukwenza ngokwakho ekhaya ukuba unezixhobo ezifanelekileyo.
Kwamadoda afuna ukugcina iinwele zawo ixesha elide kuneenwele ezityumkileyo, abasebenzi abasikiweyo yintloko enkulu yokufumana. Ukuba ucheba iinwele, abasebenzi banqunyulwa iinwele zilungile ekutsaleni ingqalelo kude noboya obucekeceke okanye incopho yomhlolokazi. Iinwele ezimfutshane zihlala zibhangqiwe kunye nokuphela okanye ukusika emacaleni nasemva, kwaye zinokucofwa ezantsi kulusu ukugqibezela okuphezulu.
Ngenxa yokuba kunqunyulwe mfutshane macala onke, ungashiya ixesha elide ngaphezulu kwaye ugcine isitayile esiqhelekileyo. Amadoda ayithandayo le ndlela ihlala ingamakhwenkwe afumana ukulahleka kweenwele esemncinci.
Intloko ye-bald echetyiweyo ibisoloko yenye yezona zinwele zidumileyo zamadoda. Sukuba nexhala lemidlalo yentloko epheleleyo ngenxa yokuba yindlela eyahlukileyo nenesitayile yokugcina umda wobudoda. Ngapha koko, ufumana isibonelelo esongeziweyo sokungakhathazeki malunga nokubonakala kweenwele zakho kuba kungekho sitayile sifunekayo. Ukuba uyazibuza ukuba ngaba lo msiko ngowakho, kubalulekile ukuqonda ukuba iinwele zakho zibhitya njani.
iinwele kubantwana abangamakhwenkwe
Intloko echetyiweyo ilunge kakhulu kubafana abaneenwele ezirhangqiweyo, isithsaba se-balding kunye neenwele ezicothayo kuyo yonke indawo. Unokudibanisa i-razor shave kunye nentshebe yokuthungwa okongeziweyo kunye nokujolisa ingqalelo ebusweni bakho. Gcina imali kwaye utyalomali kwi-balding clipper ukusika iinwele zakho ekhaya ngalo naliphi na ixesha ofuna ngalo.
I-fade haircut yenye yeendlela ezilungileyo zamadoda aneenwele ezincinci okanye ezinciphileyo ukunciphisa ingqalelo kumabala abo anempandla. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokuphela kokufumana eziya kwenza ukuba iinwele zakho phezulu zibonakale zigcwele kwaye ziyatyeba. Abafana banokukhetha ukusuka kwindawo ephezulu, embindini, nasezantsi, emva koko balungelelanise ukusikwa ngesikhumba, i-bald, drop, burst, okanye i-taper.
Nokuba unwele olucothayo, uboya obuncitshisiweyo kwisithsaba sakho, okanye u-bald nje okwangoku, kukho iinwele ezipholileyo ezipholileyo eziya kujongeka zihambelana kwaye zisebenze ngohlobo lweenwele zakho. Ukusuka kwikama ukuya kuthi ga emva, cela umchebi wakho malunga ne-taper efanelekileyo yokucheba iinwele ngenkangeleko yakho!
Inwele ye-Ivy League ifuna ivolumu kwinkangeleko yeklasi onokuyinxiba naphina. Ilungele abafana abaneenwele ezishinyeneyo kodwa behla kancinci ngaphambili, i-Ivy League iqala ngamacala amafutshane kunye neenwele ezimfutshane ngaphezulu. Nangona ubude bude kancinane kunokusikwa kweqela labasebenzi, iinwele ezingaphambi kokuba zitshayelwe zatshayelwa ecaleni.
Intandokazi kaRyan Reynolds noRyan Gosling, uya kufuna ukufaka i-wax kwi-fringe xa ​​uyihlula emacaleni. Yenza okufanayo ngeenwele ngaphezulu kwisitayile sangoku esiya kwenza ukuba iinwele zakho ezinciphileyo zingabonakali ngokungongeza ubukhulu kunye noburhabaxa.
Amacala amafutshane Iinwele ezinde Phezulu
Izinwele ezimfutshane kumacala kunye neenwele ezinde ngaphezulu zinokuba zezona zilungele iinwele zamadoda anemibala. Nokuba ufuna i-taper, iphele, okanye i-undercut emacaleni nasemva, iinwele ezimfutshane zinokudibanisa utshintsho ukusuka kwizinwele kungabikho noboya kwizinwele zakho.
Ngelixa izitayile ezinde zinokuba yingxaki ukuba ungazalwa unenwele ezincinci, ubude obuphakathi ukuya kwizinwele ezinde bunokufakwa kwisitayile ukugubungela amabala anempandla. Ukwenza iinwele zakho zibukeke zigcwele, uya kufuna ukusebenzisa imveliso yesitayile se-matte ukugqiba okubhaliweyo.
Izinwele ezibuyisiweyo ezibuyiselweyo ziinwele zamadoda zakudala ezisandula ukudityaniswa kunye ne-undercut yokwenza isitayile sangoku. Epholileyo kwaye enesidima, umnumzana namhlanje unqunyulwe emacaleni emva koko asebenzise ipomade ukudibanisa iinwele zabo, ethathela ingqalelo kude neenwele zabo eziyekelelayo kwaye bade bagqume nesithsaba sabo.
Iinwele ezihexayo zangasemva zikwenza oku ngokudibanisa iinwele zakho ukongeza ivolumu kuzo zonke iindawo ezifanelekileyo, kwaye isitayile esilula ukufezekisa njengoko ufuna ikama kunye nemveliso eyomeleleyo yesitayile. Gqiba nge touch of hairspray ukuyigcina isendaweni, ngakumbi ukuba kunomoya okanye iinwele zakho zinengqondo yazo. Lumka ungasebenzisi imveliso eninzi kakhulu kwizinwele zakho njengoko ziya kubonakala zinamafutha kwaye zingathandeki.
Olona hlobo lweenwele lubonakala emadodeni kukudibanisa. Usebenzisa umphetho njengesiseko, ikama ngaphezulu likuvumela ukuba ungeze ubunzima kwinkangeleko yakho ngokudibanisa zonke iinwele zakho. Ngenxa yoko, lukhetho oluhle kakhulu kubafana iinwele zabo zingqindilili okanye zibhityile.
Isitshixo kukuqinisekisa ukuba inde kancinci ngaphambili ukuze ubenento oza kusebenza nayo xa uyitayile. Sebenzisa kuphela inani elincinci le-wax ukongeza ivolumu engaphezulu, emva koko utshayele okanye udibanise yonke into uye kwicala elinye. Beka nge-hairspray. Ukuba ufumana ilahleko ebonakalayo yeenwele, ungazami ikama ngaphezulu kwaye ucinge ukuba uya kumkhohlisa nabani na.
Quiff ngeTaper Fade
Umdibaniso we-quiff kunye ne-taper fade uqinisekisa ukuba kukho umahluko omnandi phakathi komphambili namacala ezinwele zakho. Oku kuyenza ibonakale ngokungathi uneenwele ezingaphezulu, kwaye isitayile sokudibanisa amadoda sifuna njalo. Unokwenza okufanayo ngepompadour.
Ngokufana nekama ngaphezulu, ufuna ubude obungaphezulu ngaphezulu koku kusikwa ukuze usebenze. Xa amadoda eyifumana ngokuchanekileyo, ayisiyiyo kuphela ekhangeleka inomtsalane, kodwa isarifu ithatha iminyaka ebusweni bakho. Ikhowudi ibandakanya umgangatho owahlukileyo owuthandayo.
Ukucheba iinwele okuPhakamileyo kunye nokuQinisekile
Kukusika okuphezulu kwaye okuxineneyo okusilela kuguquguquko, kuyenzela ngokulondolozwa okuphantsi, ukusebenza, kunye nokulula isitayile. Njengendlela yokucheba kwezomkhosi, ukuphela okuphezulu kunye nokuqina kufutshane kwaye kulula kuyo yonke indawo, kodwa kushushu ngokujonga okurhabaxa. Ukunqunyulwa kuhlala kudityaniswa nolusu oluphakamileyo emacaleni nasemqolo ukufihla amabala anempandla.
Ukusikwa okufutshane kakhulu kudibanisa amacala kunye nomphezulu, emva koko kugxile ekuqwalaselweni kwizinwele ezimfutshane ezingentla ukuze iinwele zakho ezibuyayo zingagxili. Njengoko iinwele zakho zingaphezulu, ungacheba amacala kwaye usike umphezulu ube mfutshane. Kukhetho olomeleleyo kubafana abangamadoda abafuna ukufihla impandla yamadoda naphina entloko.
Ulusu luphele kunye neenwele ezimfutshane
Ukuphela kolusu kunye neenwele ezimfutshane combo ziindlela zanamhlanje ezithandwa ngabafana abancinci. Amacala, ngelixa amafutshane, avumela isityalo esityebileyo seenwele ngaphezulu, sisenza ukuba silungele isitayile. Ke ngoko, ufumana ukungafani kakhulu nokusikwa kunabanye abakolu luhlu.
Kananjalo, yinto entle enobuhle eyinto emnandi ekukhetheni abafana abafuna ukuvela ngezizathu ezifanelekileyo. Kuba sisitayile sangoku, kuyakwenza ukuba ubonakale umncinci. Zonke ezi mpawu zithetha ukuba zisebenza kakuhle kubafana abasandula ukuqala ukubala.
Zama ukudibanisa umva xa ufuna ukuthanda ngokusesikweni okufuna intlonipho. Kanye njengangoku kwaye ukwenze ubonakale umncinci, isitayile sendalo ebuyileyo sithetha ukuba iimpawu zakho zobuso ziya kuchazwa ngakumbi. Oku kunesiphumo sokwenza ubuso bakho buchoshwe njengezinto zakho ezintle njengamehlo akho kunye ne-jawline ilawula ukujonga kwakho.
Amadoda anencopho yomhlolokazi okanye iinwele ezingaphambuki ezingaphambeneyo anokuyibuyisela umva ngenkangeleko yokugqibela. Ukuba uhlala ukhetha ikama ngaphezulu, ungadibanisa isitayile sakho somsitho osesikweni kunye nale nguqulelo ibuyileyo.
I-faux hawk inokusikwa kakhulu kunye nesitayile ukuba ufuna ukufaka iinwele zakho ezihlayo kwizinwele zakho. I-faux hawk iyinwele ecelomngeni kuba ubude obuninzi ngaphezulu buya kwenza ukuba iinwele zakho ezinciphileyo zibonakale zilumkile. Okwangoku, logama nje lifutshane, isitayile siza kwenza umahluko omangalisayo oya kukwenza ubonakale ukhaliphile kwaye unesibindi.
Ikwabizwa ngokuba yi-fohawk, le iinwele zihlala zibhangqiwe kunye nokufiphala okufutshane okanye ukungcola emacaleni. Esinye isizathu sokuba amadoda athande i-faux hawk kukuba kukho iindlela ezininzi kumacala. Ungayiphinda uyibuyisele umva ukuba ukhetha ukukhula okuthile okanye ukuphakamisa ukuba uneenwele ezomeleleyo.
Nangona igama lingenamtsalane, isitayile njengoko le yunifomu isikiweyo ifihla ukubuyela kweenqwelo moya zangaphambili. Yenza oku ngokunqunqa iinwele zakho malunga nekota ye-intshi ubude obuqhelekileyo ngeenxa zonke entlokweni yakho.
Ngokulandela imigca yentloko yakho, iinwele ziwela ngokwendalo ngaphambili, zinike inkangeleko yendalo kwaye ziqinisekise ukuba naziphi na iindawo ezinempandla azibonakali. Ngenxa yesitayile esingagungqiyo sale nwele, iinwele zakho ziya kusikwa zicoceke kwaye zixhamle kukonyusa ukubulela kobudoda kubume bayo obufutshane.
Mfutshane kunye noMessy
Mfutshane kwaye kuyamdaka kuhlala kubizwa ngokuba kukutsha okuvela ebhedini kujonga kwizangqa ezininzi. Ubumdaka beenwele zakho bubandakanya ubume kwisitayile sakho, kwaye ungayisebenzisa ukufihla inwele ezinciphayo ngokuyitsalela phambili. Ukubonakala kuhluthisiwe akunakuba lukhetho lwakho lokuqala, kodwa kudidi oluphezulu kwaye luyathandeka xa iinwele zinde.
Ngaphezu koko, kulula kakhulu ukuyifumana kuba ufuna ukubonakala ngokungathi usandul 'ukuphuma ebhedini, kodwa ngomnwe wobuhle. Zomise iinwele zakho emva koko ubambe itawuli kunye nepomade. Faka i-wax kwiinwele zakho kwaye uyiphulule ngetawuli ukongeza ukungangqinelani.
Ukuphela kwepompadour kuyaqhubeka nokuba sisiqhelo esomeleleyo seenwele zamadoda kwiivenkile zokucheba kwihlabathi liphela. I-pompadour yeenwele inokufuna isitayile esithile, kodwa isiphumo kukujongeka kwesitayile wonke umntu anokusixabisa. Hlanganisa ubungangamsha bakho obufutshane ngaphambili kunye netaper fade emacaleni nasemva ukuze ufumane ukusikwa okuguquguqukayo.
Sebenzisa i-matte pomade, i-wax okanye udongwe kwizinwele ezenziwe ngombala eziza kukhulisa iinwele zakho. Ithambile kwaye yendalo, isitayile siyazicenga zonke iintlobo zeenwele, kubandakanya amadoda aneenwele ezintle.
Ngokungafaniyo neninzi yezinwele zasemkhosini, umgaqo osikiweyo unika amadoda iinwele ezinde ngaphezulu kwisitayile ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokubandakanya iinwele zakho, umgaqo wokucheba iinwele wenza ukunciphisa iinwele kunye nokuncipha kweenwele zakho kungabonakali. Njengonwele oludumileyo lwamadoda, amacala amafutshane ngelixa iinwele ezingaphezulu zigcinwa ixesha elide kwaye zihlala zitshayela kwelinye icala.
Nangona kunjalo, iinwele zigcinwa zibukhali kakhulu ukwenza ukwahlula okongeza umahluko kunye nokuthungwa. Kuba zineenwele ezinde ngaphezulu, ngokungafaniyo nokusikwa kwe-buzz okanye ukuphakama nokuxinana, unokukhetha isitayile ukunceda ukutshintsha inkangeleko yakho.
Ukucheba iinwele kwamadoda aneenwele eziNciphile
Amadoda aneenwele ezibhityileyo okanye ezinciphileyo anokucinga ukuba akunakwenzeka ukufumana iinwele ezipholileyo, kodwa zininzi iinwele zamadoda ezinesitayile senzelwe iinwele ezibhityileyo. Ukusuka kwisiphithiphithi sesityalo esingcolileyo ukuya ekunciphiseni umva kwe-undercut, ezona zinwele zilungileyo zamadoda aneenwele ezomileyo ekuqaleni okuphezulu kunqunyulwe okufutshane emacaleni nasemva. Ngokufanelekileyo, uhlobo lwe-taper fade luya kwandisa ukhetho lwakho lwesitayile kwaye ugcine amacala elula kunye nokugcinwa okuncinci.
Ngelixa usenokucinga ukuba iinwele ezimfutshane lukhetho olufanelekileyo, iinwele ezimfutshane ezibhityileyo zenza ukuba kube lula ukubona isikhumba sakho sokhakhayi, ngokwenjenje uzisa ingqalelo kumphezulu wakho wokubhitya. Endaweni yoko, uya kufuna ukukhula ngaphandle kweenwele zakho ukuze ufumane ubude obuphakathi ukuya kwizinwele ezinde. Zibukeka kwaye zinemfashini, izitayile zokucheba iinwele ezinje ngekama ngaphezulu, i-quiff, ibrashi umva, i-spikes ezenziwe ngombala, kunye nomqukumbelo omdaka unikezela ngevolumu yokujonga okujiyileyo.
I-Stubble okanye iindevu ezipheleleyo zinokubonelela ngokugqibezela okutsala umdla wobuso bakho bobudoda. Okokugqibela, iinwele ezincinci zamadoda ziya kudinga ukuqala ukusebenzisa iimveliso zeenwele ezifanelekileyo. Ukusuka kwi-shampoo ukuya kwi-conditioner ukuya kwi-pomade, ukhathalelo lweenwele olufanelekileyo lubalulekile xa unyanga ukulahleka kweenwele.
Iimveliso zeenwele eziPhambili zaMadoda zeNwele eziNciphile
Iimveliso zeenwele zamadoda zeenwele ezincinci zenzelwe ukukhulisa ivolumu kunye nokongeza ukugcwala. Iishampu ezifanelekileyo kunye neemeko zokulungisa zinokulungisa iinwele ezonakeleyo, zondle isikhumba sentloko kunye neefollic ukukhuthaza, kwaye ekugqibeleni zenze noboya obuninzi. Okwangoku, ezona mveliso zintle zinokunceda abafana ukuba bafezekise iinwele ezishinyeneyo. Umzekelo, iimveliso ze-matte zinokushiya ukugqitywa okulungiselelwe ukubonakala okunempilo, okugcweleyo okuya kugubungela amabala anempandla.
Jonga ezona shampoos zilungileyo kunye neemeko ezifanelekileyo zamadoda aneenwele ezicothayo ezifuna ukomeleza iinwele ngelixa zikhuthaza ukukhula okutsha. Ngayo yonke-yendalo izithako eziphilayo ezenza ukucoca, ukuthambisa, imeko kunye nokomeleza iinwele zamadoda, ezi mpawu zinexabiso eliphezulu kufanelekile ukuba ziqwalaselwe.
Ukunyuka kweenwele zeLaser zeLebhu | I-Caffeine yokulahleka kweNwele yokuKhula kweNwele yokuKhuthaza iShampu ye-8 oz 11.098 Izinto ezithethwe ngabantu $ 67.95 Jonga iAmazon
UJack Mnyama weNyani yokuQinisa iShampu, i-16 yeoyunce 872 Izinto ezithethwe ngabantu $ 28.00 Jonga iAmazon
I-Rogaine yamadoda ye-5% ye-Minoxidil Foam yokuNcipha kweNwele kunye nokuBuya kweNwele, uNyango lwezihloko zokuCoca ... Izimvo eziyi-17,334 $ 44.99 Jonga iAmazon
Ukufumana ezona zinwele zilungileyo, uyakufuna imveliso yesitayile esisebenza kakuhle neenwele ezinciphileyo. Ukusuka kwimicu yokwakha iinwele ukufihla ukulahleka kweenwele kumdongwe ngenkangeleko yendalo, ezi mveliso zeenwele ezingcakacileyo zilungile.
Imisonto yeToppik yokwakha iinwele, Mnyama, 1.94 oz 972 Izinto ezithethwe ngabantu $ 79.95 Jonga iAmazon
IBaxter yaseCarlifonia Clay Pomade, iMatte igqityiwe / iStrong Hold, iinwele zenziwe ngamadoda, 2 fl. Oz 3,572 Izinto ezithethwe ngabantu $ 23.00 Jonga iAmazon
I-Cavrite Matte Cream, Esisiseko, emhlophe, Cream Soda ethambileyo, 4.25 Oz 4.344 Izinto ezithethwe ngabantu $ 18.00 Jonga iAmazon
ijija iinwele zamadoda
wavuka tattoos engalweni
ii tattoos ezincinci zangaphambili zabafana
ipateni yobudoda iinwele zeenwele
amadoda iinwele iinwele ezingqingqwa